Waqti badan kuma qaato sida aan jeclaan lahaa inaan ku galo Twitter-ka, laakiin dhab ahaantii waxay isu asaastay inay tahay qalab weyn - leh adeegsiyo badan oo kala duwan. Mid ka mid ah adeegsigaas aniga ayaa adeegsanaya si aan ugu dhawaaqo qoraalladayda si otomaatig ah sidaa darteed mid kasta oo ka mid ah kuwa raacsan ayaa ogaanaya markaan ku daabacay boggeyga. Waa mid otomaatig ah iyada oo loo adeegsanayo Qalabka Cusbooneysiinta Twitter-ka ee loogu talagalay WordPress.
Doono si xor ah soo dejiso dhammaan astaamaha Twitter iyo xitaa feylka Sawirka waxaan u isticmaali jiray qaabeynta. Maaddaama aanan aheyn farshaxan farshaxan, waxba kama qabo meesha iyo sida aad u isticmaasho ama haddii aad horumariso. Waxaan rajeynayaa, Twitter sidoo kale ma!